Apple Inoburitsa iOS 10.0.3 Kugadzirisa iPhone 7 Kubatanidza Matambudziko | IPhone nhau
Apple Inoburitsa iOS 10.0.3 Kugadzirisa iPhone 7 Kubatanidza Nyaya
Apple yatanga maminetsi mashoma apfuura uye nekushamisika iOS 10.0.3. Iyi yekuvandudza yasvika anopfuura mavhiki matatu mushure meiyo launch kubva kuiyo yapfuura vhezheni, iyo iOS 10.0.2 iyo yakauya kugadzirisa bugs. Kufanana neiyo vhezheni, iOS 10.0.3 inouyawo nemagadziriso, asi inowanikwa chete kune iPhone 7 uye iPhone 7 Plus nekuti iyi vhezheni nyowani yeApple's mobile operating system yakatangwa nechinangwa chega chekugadzirisa kumwe kutadza kwekubatana kunoitika kune varidzi vemhando dzazvino dzeapuro foni.
Kukura kweyekuvandudza hakusi kusiya nzvimbo yekusahadzika: inenge 70mb pane iyo iPhone 7 Plus. Iyo isina kuremerwa yekugadzirisa inogona kungosanganisira mashoma mashoma. Kana ndisina kukanganisa, iOS 10.0.3 ichagadzirisa matambudziko ekubatanidza LTE, kunyanya avo vanobva kuVerizon. Zvingangodaro kuti zvigamba zvakasanganisirwa mushanduro iyi zvakare zvinogadzirisa bug iyo inogona kukonzeresa kuti iPhone 7 isabatanidze nharembozha kana ndege yadzimwa, asi ichi chinhu chatinogona kungosimbisa mushure memaawa.
iOS 10.0.3 ingori diki diki
Kugadziridza kudiki seizvi, kunyanya dai tisina kusangana nedambudziko, kazhinji kazhinji pane mashoma. Muchokwadi, Apple inowanzo kuburitsa vhezheni nyowani yeIOS yezvose zviyero uye iyi vhezheni yeIOS inongowanikwa chete kune ayo maviri ekupedzisira mafoni kuti asvike kumhuri yeCupertino. Zvatinomirira tese, kunyanya avo vane yavo iPhone 7 Plus, ndiyo iOS 10.1 kuburitswa, vhezheni inosvika neinotarisirwa kubva mukuzivisa kwayo, basa rinozotibvumidza isu kutora mafoto nemhedzisiro neakakanganiswa kumashure.
Saka nhasi tanga tine vhezheni nyowani yeIOS iyo iri chokwadi yekuodza mwoyo isu tese takamirira Apple kuti isunungure zvimwe zvakakosha zvinhu. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple Inoburitsa iOS 10.0.3 Kugadzirisa iPhone 7 Kubatanidza Nyaya
Ndine iyo iPhone 7 uye manheru ega ega ini ndinoisa ndege nzira yekurara uye handina kumbobvira ndasangana nematambudziko aunotaura ayo anozove evamwe vashandisi vandinofunga. PS Ndine iyo 10.0.1 yakauya yakajairika
Wako wakanaka chiPhilippines akadaro
Bvudzi asi iri beta 3 kana 4?
Ndine beta 4 dunhu yakaiswa!
Pindura kune Wako wakanaka chiPhilippines
Iyi ndiyo vhezheni yepamutemo. Nezuro vakaburitsa iOS 10.0.3 uye iOS 10.1 beta 4.
Zvakanaka, iyo yekudzorera yarova iyo iPhone…. inongotangazve pasina kubatidza ... Aya mhosho haifanire kuitwa naApple
Wongorora uye raffle yeiyo Just Mobile TENC AutoHeal kesi
Ziva kuti matambudziko manomwe anokonzeresa mamirioni mashanu evashandisi kuchinjira kune iPhone